Navoakan'i	 Paweł Czechowski
No ale zaraz – powiecie – cóż to za rozwój, który mitana ny toeran'ny niszczy, a nie buduje? Jest w tym myśleniu ziarno prawdy, ale nawet stworzenie zaawansowanej i śmiercionośnej bomby wymaga pewnego rozwoju badawczego i ciągnie za sobą, w mniejszym lub większym stopniu, takie kwestie jak rozwój produkcyjny itp.
NASA, Sina, Musk ary ovy. Ny Red Planet dia maka fanahy ny Blue
Shina, kosmos, March, NASA, spacex
Ao amin'ny sarimihetsika mamoaka "The Martian", Mark Watney, mpahay siansa mpanamory sambon-tany navela irery tao Mars, indray mandeha dia nanomboka namboly ovy. Tsy azo ampiharina fotsiny izany, mba hahavelomana, fa an'ohatra koa - fambolena sy fijinjana ...
Sary tsara tarehy eto an-tany avy eo amin'ny tokotanin'ny gara
iss, kosmos, SARY
Jereo ny zava-drehetra avy any ambony ary jereo ny hakanton'ny tany amin'ny fomba fijery mety. Vitsy no tsara vintana miaina izany. Saingy, i Saoichi Noguchi dia tsy miaina izany fotsiny fa mizara an'izao tontolo izao. Topazo maso ireo sariny. Saoichi ...
Skyscraper amin'ny volana? Efa misy ny tetikasa voalohany!
toeram-ponenana, fanjanahantany, kosmos, volana
Nanomboka indray ny hazakazaka habakabaka. Etsy ankilany, te-hidina haingana any Mars isika, etsy ankilany, ny masoivoho lehibe rehetra dia te-hanangana fototra amin'ny volana. Izahay dia manana tetik'asa ho an'ny trano ambony voalohany izay azo hatsangana ao. ESA dia ...
Momba ny fomba nifankahitana lavaka mainty roa
kosmos, siansa tany Polonina
Tamin'ny volana aprily tamin'ny taon-dasa, dia voamarina ny onja misintona, izay nanondro fa nisy lavaka mainty roa samy hafa be dia be no nitambatra. Ny ekipa tarihan'i Poles izao dia nanazava ny fomba ahafahan'ny eny ...
Betsaka ny vola miandry amin'ny fitrandrahana habakabaka
26 Septambra 2020
kosmos, siansa, siansa tany Polonina
Mitodika any amin'ny habakabaka izao tontolo izao, izay toerana tiany hamoahana vola mitahiry vola be sy sarotra isaina amin'ny volana sy asteroid. Mampivelatra teknolojia vaovao ny fanombohana, mora vidy kokoa ny sidina orbit, ary manaparitaka fahitana mahazo tombony goavana ny governemanta. Momba izany -...
Nandefa sambo fiaramanidina ho any amin'ny habakabaka i Shina. Tanjona? Secret.
Tamim-pahanginana, tsy nisy fanamoriana firy, nandefa sambon-danitra ho any amin'ny habakabaka i Shina. Tsy fantatra ny tanjony, ary tsy fantatsika hoe rahoviana izy no hiverina eto an-tany. Manome toky anefa i Sina fa milamina ny iraka ampanaovina azy. Mitohy ny fikarohana ny habakabaka ...
Tongasoa eto! Ireo mpanamory fiaramanidina nandositra Crew Dragon dia manana daty fiverenana!
dragona, kosmos, spacex
Ny daty roa dia manan-danja amin'ny fitsangatsanganana eny amin'ny habakabaka. Rehefa manao dia lavitra isika ary rehefa miverina avy any aminy;) Mihevitra aho fa tsy ho faly toy ny niantombohany ny fiverenan'ny astronono. Fa tsara ny mahafantatra hoe ...
Ireo astronotte ao amin'ny ISS dia hahazo mpiara-miasa robotic vaovao
Rehefa ao amin'ny habaka ianao dia mety hahatsiaro ho manirery. Ny akaiky indrindra McDonald 400 km, izay tena lavitra. Ary rehefa mipetraka toy itony sy miverina manodidina ianao dia tsara raha miresaka amin'ny olona iray. Noho izany ...